Joogtaynta - Foton Motor Group Co., Ltd.
deegaanka u roon
FOTON waxay ku raaxeysaneysaa cinwaannada shirkaddii ugu horreysay ee gawaarida ee Shiinaha oo ku hawlan R&D ee baska ku shaqeeya tamarta cagaaran, soo saaraha ugu horreeya ee baska ay ku shaqeyso shidaalka hydrogen iyo shirkadda baabuurta oo leh masaafada ugu dheer ee hal gaari adduunka.
ALAABADA Tamarta cusub
Dhammaan taxanaha gawaarida ganacsiga, oo ay ku jiraan gaariga rakaabka, baska, xamuulka iyo SPV. Basaska AUV oo u dhexeeya 5.9m ilaa 18m waa badbaado, la isku halleyn karo iyo xalka cagaaran ee gaadiidka rakaabka, safarka iyo socdaalka. Iibinta gawaarida cagaaran ayaa kaalinta koowaad ka galay warshadaha sanadihii isku xigxiga. Bishii Meey 2016, FOTON waxay ku guuleysatay amar 100 bas ah oo ku shaqeeya unugga shidaalka ee hydrogen, kaasoo ah kan ugu badan adduunka.
FARSAMADA Tamarta cusub
FOTON waxay awood u leedahay inay fuliso R&D ee 8 tiknoolajiyad asaasi ah oo ku saabsan gawaarida tamarta cusub oo ay kujirto isdhexgalka powertrain, xirxirida batteriga, xakamaynta mootada iyo softiweerka xakamaynta gawaarida waxayna codsatay 1,032 shatiyada laxiriira waxayna leedahay in kabadan 70% teknoolojiyada shatiga. FOTON waxay si guul leh u soo saartay 32-bit xakamaynta gawaarida, nidaamka maaraynta batteriga iyo nidaamka xakamaynta mootada, kuwaas oo lagu dabaqay badeecooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin basaska tamarta cusub iyo gawaarida saadka. Sannado 'R & D' madax-bannaan ayaa FOTON u oggolaanaya FOTON inay lahaato tiknoolajiyada asaasiga ah ee batteriga, mootada iyo nidaamka xakamaynta elektiroonigga ah si loo buuxiyo shuruudaha ku saabsan dardargelinta, fuulitaanka, socodka iyo muddada lacag bixinta.
FOTON waxay maalgashi ku samaysay RMB 23 bilyan waxayna dhistay dhir casri ah oo casri ah iyo khadad wax soo saar toos ah muddo 4 sano ah iyadoo lagu saleynayo fikradda ka bixitaanka eber, xiriir iyo otomatig la'aan lagu sii casriyeyn karo tiknoolajiyad otomaatig ah, dijitaal iyo caqli leh.
Dhirta Casriga ah
Khadadka wax soo saarka otomaatiga ah
Khadadka dahaadhka robotka
Khadka wax soo saarka electrophoresis baska 13.7m
Khadka alxanka Automatic
Khadadka isku-xidhka Robot